Savorovoro teto an-drenivohitra : nidoboka eny Antanimora ilay nanely tsaho tao anaty facebook | NewsMada
Savorovoro teto an-drenivohitra : nidoboka eny Antanimora ilay nanely tsaho tao anaty facebook
Par Taratra sur 14/11/2017
Nidoboka am-ponja, omaly rehefa avy natolotra ny fampanoavana ilay tovolahy voarohirohy tamin’ny fanelezana vaovao tsy marina tamin’ny “facebook” ka nitarika korontana sy sarovorovo teto an-drenivohitra, ny herinandro teo. Nilaza izy fa misy mpitsabo avy amin’ny minisiteran’ny Fahasalamana mitety sekoly sy manindrona mpianatra…
Voasambotry ny polisy misahana ny heloka bevava sakelika fahatelo ity tovolahy iray mpanely vaovao tsy marina ka niteraka fikorontanan-tsaina teo amin’ireo ray aman-drenin’ny mpianatra sy teny anivon’ny sekoly momba ny resaka vaksinin’ny valanaretina pesta. Araka ny fanazavan’ny polisin’ny BC, taorian’ny savorovoro izay niseho, ny alakamisy 9 novambra 2017 lasa teo noho ny fanaparitahana vaovao tsy marina tamin’ny tambajotran-tserasera “facebook”, milaza fa misy mpitandro filaminana sy mpitsabo avy amin’ny minisiteran’ny Fahasalamana mitety sekoly sy manindrona ireo mpianatra dia tsy maintsy nandray ny andraikiny avy hatrany teo anivon’ny polisim-pirenena mba hahafantarana marina ny zava-niseho ka nitarika ireny korontana ireny. Taorian’ny fanadihadiana rehetra, fantatra izao fa fanaparitahana vaovao tsy marina niniana natao no niteraka ireny savorovoro ireny. Tovolahy iray, 24 taona no anisan’ny voarohirohy amin’ity raharaha ity. Niaiky ny heloka vitany izy nandritra ny famotorana nataon’ny polisy. Raha ny fanazavana nomeny nandritra ny famotoran’ny polisy, zavatra noforoniny ka nampiany izay mba hitany teny amin’ny pejy hafa tao amin’ny facebook no navoakany mba hisintonany fotsiny ny fifantohan’ny rehetra any aminy.
Niala tsiny tamin’ireo ray aman-drenin’ny mpianatra nitebiteby noho ny savorovoro nateraky ny “publication” nataony izy ary misarika ireo tanora mitovy taona aminy mba hitandrina amin’ny fampiasana “facebook”.
Anatra ho an’ny tanora sy ny olon-dehibe tsy manan-katao fa zatra mitsikera sy mpanely tsaho na manaratsy olona amin’ny “facebook” ny toy izao. Tokony hampamendrahana hatrany ny fikirakirana ireny “facebook” ireny.